Hery Rajaonarimampianina : Tsy tokony hisy intsony ireo tsimatimanota -
AccueilRaharaham-pirenenaHery Rajaonarimampianina : Tsy tokony hisy intsony ireo tsimatimanota
14/04/2018 admintriatra Raharaham-pirenena 0
Maro no tsy mankasitraka sy tofoka manoloana ireo izay nahavita heloka nefa tsy mizaka izany, mitovy hevitra amin’ ny rehetra ihany koa eto anefa ny Filoham-pirenena Hery Rajaonarimampianina satria izy ireny hoy izy no fanetriben’ ny firenena. “Fositra iray tsy mampandroso ny firenena ny fisian’ ny tsimatimanota, afa-bela fotsiny amin’ny hadisoana sy heloka be vava nataon’ ny olona sasany toa ny mpitondra, ny mpitantanana, ny mpanao politika sy ireo izay mpiray petsapetsa aminy”. Amin’ izao ankatoky ny fifidianana izao anefa dia nambaran’ny Filoham-pirenena fa misy ny mbola te hamerina sy hanohy ny asa ratsiny, noho izany hoy ny Filoha raha misy ny mason-tsivana izay tokony ho dinihin’ ny Malagasy dia io resaka tsimatimanota io. Eo amin’ ny lafin’ny politika tokoa mantsy no tena hahitana ny tsimatimanota, ary tsy voahenjiky ny lalàna mihitsy, “mihevitra ny tenany ho madio daholo ny mpisehatra politika, tsy izay anefa anefa ny zava-misy. Tarehimarika iray no homeko araka ny fanadihadiana, dia tsy latsaky ny folo miliara Dolara ny harena voaroba teto Madagasikara tao anatin’ ny 15 taona farany, ao anatin’izany ny hazo sarobidy sy ny harena an-kibon’ ny tany.
Ankehitriny tokoa mantsy dia lasa resaka ny mikasika ny fahantran’ ny Malagasy, kanefa dia maro ireo harena izay misy eto, manoloana izany indrindra dia nitondra ny valinteny mazava mahakasika izany ny Filoham-pirenena. “ Manjaka loatra ireo tsimatimanota, maty eritreritra tsy voasazy noho ny fampiasan’ny volany amin’ ny kolikoly dia tsy voaheloka na minia manitsakitsaka didim-pitsarana tsotr’izao. Tsy misy valinteny ankoatra izay, ary tsy misy porofo mihoatra io ambarako io” hoy hatrany ny Filoha. Noho izany dia manamafy ny Filoham-pirenana fa tsy mitsabaka velively amina raharaham-pitsarana , na dia lazaina aza fa olona akaiky azy voarohirohy. Mahaleo tena ny fitsarana hoy ny Filoham-pirenena ary tokony hanao ny asany ampahamendrehana sy ampahamarinana. Niverenan’ny Filoha nangalany ohatra mikasika izay fahaleovantenan’ny fitsarana izay izao ny raharaha Antsakabary, izay nanambarany fa “ efa vita ny famotorana teo anivon’ ny mpitandro filaminana, ary ao anatin’ ny famotorana lalina ny mpitsara amin’izao fotoana izao” hoy hatrany ny filoham-pirenena malagasy . Tsy izay ihany hoy izy fa eo ihany koa ny raharaha fanitsakitsahana ny zon’ olombelona rehetra sy ny dahalo ambony latabatra, tokony ho matotra ny fanadihadiana sy ny famotorana hoy ny filoha Hery Rajaonarimampianina satria ady amin’ ny tsimatimanota avokoa izany.
Noho izany hoy ny filoham-pirenena malagasy “tsy tokony hisy intsony ny tsimatimanota mialokaloka amin’ ny famotsoran-keloka sy ny fampihavanam-pirenena noho ny heloka be vava ara-politika , amporisihiko ny antoko politika sy fikambanana tahaka ireo izay mpikambana ao amin’ ny vondrona iraisam-pirenena misahana ny zon’ olobelona mba hitsapaka ankitsirano ny fandraisana anjaran ’ireo tsimatimanota amin’ ny fifidianana ho avy. Tsy matahotra ny hametraka mihitsy ny “haute cour de justice” ny tenako, nametraka olana ny fanendrena ny olona sasany ka izay no nahatonga ny fahatarana” hoy hatrany ny Filoha nitondra fanazavana. Noho izany mba ahafahana miady amin’ izay tsimatimanota izay dia efa misy ny lalàna efa vonona amin’ izany “ efa vonona amin’ izao fotoana izao ny volavolan-dalàna ahafahana manadihady ny fananana sy harena tsy fantam-pihaviana, miandry ny parlemanta ny fankatoavana azy. Tsy finiavana hanenjika olona manokana izany , satria isaka ny tonga eny amin’ny parlemanta io volavolan-dalàna io, dia mitsangana foana ny mpomba ireo mpitondra teo aloha milaza fa fisakanana ny kandidany na kandida anankiray izany, ka tsy tokony holaniana. Lasa resaka olon-tokana ny tokony ho fiarovana ny tombontsoam-pirenena ” hoy hatrany ny filoha Hery Rajaonarimampianina.
Raha ny lalàna no resahina ihany hoy ny Filoha dia misy ny tribonaly mitsara ny fanondranana ny hazo sarobidy tahaka ny andramena, fitsarana manokana ihany koa no hitsara ny kolikoly hoy ny Filoha fa tsy tahaka ny teo aloha intsony. Manoloana ireo noresahin’ ny filoha Hery Rajaonarimampianina ireo dia nambarany ihany koa fa tsy misaraka ny kolikoly sy ny tsimatimanota, ary manana andraikitra lehibe amin’ izany ny BIANCO, ary ireo lalàna izay voalaza teo aloha ireo dia hanampy amin’izany ny SAMIFIN manoloana ny ady amin’ ny fanadiovana vola maloto. Tsy maintsy tohizana ny ady amin’ ny tsimatimanota hoy ny Filoham-pirenena Hery Rajaonarimampianina, ary nambaran’ny Filoha ihany koa fa manana fahavononana sy fahasahiana amin’izany ny tenany. Tsy hohadinoin’ ny Filoha ihany koa ny nitondra ny antso ho an’ny vahoaka malagasy tsy ankanavaka , satria nambarany fa mpitarika ny tenany fa ny tsirairay dia tokony hahatsiaro tena fa manana andraikitra amin’ izany.
Tafiditra anatin’ny fanatsarana ny fomba fiasany ny vaomiera mahaleo tena misahana ny fifidianana, na ny CENI amin’ izao fotoana izao, noho izany hosoloina avokoa ireo mpikambana mandrafitra ny biraom-pifidianana, izay nahitana olana sy tsy fahatomombanana. ...Tohiny